Mharidzo: Simba reInfographics | Martech Zone
Mharidzo: Simba reInfographics
Mugovera, Kukadzi 25, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Muhammad Yasin akagadzira inonakidza uye yakadzama mharidzo pane simba uye zano re infographic yekusika, kugovera uye kusimudzira. Tataura nezve infographics zvakati wandei paMartech uye yedu agency iri kuvandudza nekugadzira mamwe infographics kupfuura nakare kose.
Nei dzakakurumbira zvakadaro? Chikonzero chakareruka ndechekuti infographics ine musanganiswa wevari vaviri inokwezva, inotakurika, uye inogaya nyore nyore. Cherekedza ini handina kutaura zvakarurama? Ndiko nekuti ini handifunge kuti chinangwa che infographics ndechekuti ugare uchipindura mubvunzo - dzimwe nguva zvinongomutsa muverengi kuti atarise zvakadzama musoro wenyaya. Kubva pakuona kwakarongeka, infographic inzira inoshamisa yekusimudzira zvese kutsvaga pamwe nevezvenhau.
Mahammad anoshandira mutengi wedu, HCCMIS, kambani inopa famba inishuwarenzi yekurapa kumakambani… kunyangwe zvedu sezvo isu tichishanda mhiri kwemakungwa pamwe nekumba.
Tags: kukudziridza infographicsinfographics zanoshandisa infographics
Yakatumidzwa yepamusoro 20 Bhizinesi Rekushambadzira Blog!
Infographics: Yemagariro Midhiya Yakavanzika
Kukadzi 25, 2012 na2: 22 PM
Kutenda nemashoko emutsa, Doug.
Kukadzi 25, 2012 na3: 38 PM
Iyo inonakidza mharidzo Muhammad!